HAMRAKHABAR | » नेपालले जितेपछि के भने पारस खड्काले ? नेपालले जितेपछि के भने पारस खड्काले ? – HAMRAKHABAR
नेपालले जितेपछि के भने पारस खड्काले ?
त्रिदेशीय सिरिजको उद्घाटन खेलमा नेपालले नेदरल्याण्डमाथि ९ विकेटको जित हात पारेको छ । डेब्यू गरेका खेलाडीहरु कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले शानदार अर्धशतकीय इनिङ खेलेपछि नेपालले ३० बल बाँकी छँदै जीत हात पारेको हो ।
आजको खेलमा प्लेइङ ११ घोषणा हुँदा कैयौंले पारस खड्का किन खेलेनन् भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिर्ए । पूर्वकप्तान पारस गएको आइतबार अभ्यास खेलका क्रममा घाइते भएकोले आजको खेल नखेलेका हुन् । पारसले ट्वीटरमार्फत आफू घाइते भएकोले आजको खेल खेल्न नसक्ने बताएका थिए ।
आज नेपालले खेल जितेपछि पारसले ट्वीट गर्दै कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको प्रशंशा गरेका छन् । उनले कुशल र आसिफको प्रदर्शनलाई अद्भूत भनेका थिए । पारसले आजै बिहान पनि ट्वीट गर्दै नेपाली टिमलाई तीतको शुभकामना दिएका थिए ।
नेपालले नेदरल्याण्डमाथि शानदार जीत हात पारेसँगै सामाजिक संजालमा यसको चर्चा छ । माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरमा लगातार क्रिकेट सम्बन्धी ह्याशट्यागहरु ट्रेन्ड गरिरहेका छन् । नेपालले आज नेदरल्याण्डलाई ३० बल बाँकी छँदै ९ विकेटले पराजित गरेको हो । ट्वीटरमा यतिबेला नेपाल भर्सेज नेदरल्याण्ड, नेपाल, कुशल भुर्तेल, ट्राइनेशन सिरिज, आसिफ शेख लगायत ट्रेन्ड गरिरहेका छन् ।